Topnepalnews.com | एयरपोर्टभित्र श्रेष्ठको सिन्डिकेट कहिले तोडिएला ? भण्डारी र राउतले बुझ्छन् श्रेष्ठबाट कमिसन
Posted on: June 28, 2018 | views: 5989
काठमाडौं । विवादास्पद ब्यापारी सुवास श्रेष्ठले चलाएको सिन्डिकेटका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र आन्तरिक र वाह्य पर्यटक तथा सेवाग्राहीहरू दिनदहाडै लुटिने गरेका छन् । अति संवेदनशील क्षेत्र स्टराइल कक्षमा रहेका कफि सपमा उनले लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । शक्ति केन्द्रलाई रिझाएकै भरमा श्रेष्ठले ५०० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिएर कफि, पेय पदार्थ, जंक फुडहरु विक्री गरी सेवाग्राहीहरुलाई लुटिरहेका छन् । यूनाइटेड पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जवकि सरकारी मापदण्ड अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढि नाफा लिन पाईंदैन । विमानस्थल सुधारका लागि आफैले १० बुँदे निर्देशन जारी गरेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले एयरपोर्ट भित्रका यस्ता सिन्डिकेटवालालाई कहिलेसम्म संरक्षण दिइरहने हुन् ? कर्मचारीहरु नै प्रश्न गर्छन् ।
श्रेष्ठको नाममा रहेको ग्रिनतारा मिडिया ग्रुप मार्केटिङ प्रालिले ९ वर्षदेखि विमानस्थल परिसरभित्र रहेको गोल्डेन गेटदेखि अप्रेसन भवनसम्म २५ थान र इन्टरनेशनल टर्मिनल भवनदेखि डोमेस्टिक टर्मिनल भवनसम्म २५ थान विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति पाएको छ ।
२०६६ भदौ २२ र २०६८ भदौ ११ मा दुई पटक गरी १० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको थियो । सो सम्झौतामा उक्त होर्डिङ बोर्डका साथै विमानस्थल भित्रका उपर्युक्त क्षेत्रहरुमा ब्यूटिफिकेशन(गार्डेन बनाउने र साजसज्जा) कार्य गर्न सम्झौता भएको थियो । तर, एक दशक वित्न लाग्दा पनि श्रेष्ठले पैसा र शक्तिको आडमा कुनै पनि ब्यूटिफिकेशनको कार्य नगरी होर्डिङ बोर्डको मात्रै काम गर्दै आइरहेका छन् ।
त्यसका लागि उनले गौतम निकट कर्मचारी निर्देशक प्रदिप अधिकारीसँग सम्बन्ध बढाई महानिर्देशक मार्फत सम्झौता नविकरण गराउन ठूलो रकमको चलखेल गरिरहेका छन् ।
विमानस्थल परिसरमा सरसफाईको ठेक्का लिएर डलर र हुण्डीको अवैध काम गर्दै आएका श्रेष्ठलाई विमानस्थलका प्रवत्ता एवम् निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले संरक्षण दिंदै आएका छन् । १० वर्षदेखि विमानस्थलमा अड्डा जमाएर बसेका ठाकुरले श्रेष्ठसँग भित्रभित्रै साझेदारीमा समेत काम गरिरहेको विमानस्थल स्रोत दावी गर्छ ।